Posted by Tranquillus | Agoosto 26, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Xulashada tibaaxaha edebta ugu habboon
Markaad go'aansanayso inaad ku dirto warqad ganacsi oo loo diro saaxiibkiis, kormeeraha ama macmiilka, ma fududa in la go'aamiyo ciwaanka ugu habboon ee asluubta leh. Si aad si xun ugu gudubto, khatartu aad ayay u wayn tahay in aad ka cadhaysiiso qofka wada hadlaya oo aad u gudbiso qof aan ilbaxnimo badan lahayn ama aan dan ka lahayn xeerarka ixtiraamka. Haddii aad rabto inaad hagaajiso farshaxankaaga waraaqo, hubaal waa inaad akhridaa maqaalkan.
Tibaaxaha edebta leh ee macmiilka
Marka la eego nooca rafcaanka ee loo adeegsado macmiilka, waxay ku xiran tahay xaaladda xiriirkaaga. Haddii aadan garanayn magaciisa, waxaa suurtogal ah inaad qaadato qaaciddada wicitaanka “Mudane” ama “Marwo”.
Haddii aadan ogeyn in macmiilkaagu yahay nin ama naag, waxaad haysataa ikhtiyaar ah inaad tiraahdo "Mr / Mrs".
Dhamaadka qoraalkaaga, halkan waxaa ah laba muujinta xushmadda macmiilka:
Fadlan aqbal, Mudane, muujinta dareenkayga ixtiraamka leh.
Fadlan aqbal, Marwo, hubinta salaanta ixtiraamka leh.
Qaaciidooyinka edeb leh ee horjoogaha
Markaad warqad u qorayso qof leh darajo ka sarraysa, waxaa suurtogal ah inaad isticmaasho mid ka mid ah tibaaxaha edebta ah:
Fadlan aqbal, Mudane Maareeye, dammaanadda salaankeyga ugu wanaagsan.
Fadlan aqbal, Mudane Agaasime, muujinta ixtiraamka qoto dheer.
Fadlan aqbal, Marwo, muujinta tixgelinteyda ugu sarreysa
Fadlan aqbal, Marwo Agaasime, dammaanadda tixgelinteyda.
READ Sidee si dhakhso ah u hagaajineysaa hingaadka dukumintigaaga, helitaanka software antidote.
Qaaciidooyinka asluubta leh ee saaxiibka isku heer ah
Waxaad rabtaa inaad cinwaanka boostada ugu dirto qof leh isla heerkii madaxda, waa kuwan qaar ka mid ah tibaaxaha edebta leh ee aad isticmaali karto.
Fadlan rumayso, Mudane, hubsashada salaan dhab ah
Fadlan aqbal, Marwo, muujinta dareenkayga aadka u go'ay
Waa maxay muujinta edeb -lahaanshaha ee u dhexeeya saaxiibbada?
Markaad warqad u dirayso saaxiib aad isku xirfad tihiin, waxaad isticmaali kartaa tibaaxaha edebta leh:
Fadlan guddoon, Mudane, muujinta salaan diiran.
Fadlan aqbal, Marwo, muujinta salaanta walaalkay.
Waa maxay qaababka asluubta leh ee ku wajahan qof leh heer kala sarreeya?
Si aad wax uga qabato warqad qof heerkeedu sarreeyo oo ka hooseysa kuweenna, halkan waxaa ah tibaaxo edeb leh:
Fadlan aqbal, Mudane, dammaanadda salaankeyga ugu wanaagsan.
Fadlan aqbal, Marwo, dammaanadda rabitaankayga aan jeclahay.
Waa maxay tibaaxaha edeb -lahaanta ee qofka sharafta leh?
Waxaad rabtaa inaad la xiriirto qof qiil siinaya jagada sare ee bulshada mana garanaysid qaaciddada ku filnaan doonta. Hadday sidaas tahay, halkan waxaa ah laba tibaax oo xushmad leh:
Dhammaan mahadnaqdayda, fadlan aqbal, Mudane, muujinta ixtiraamka qoto dheer
Fadlan rumayso, Marwo, muujinta tixgelinteyda ugu sarreysa.
Qaate kasta wuxuu leeyahay qaacido edeb leh oo habboon! Nofeembar 3, 2021Tranquillus
horeSidee loo adeegsadaa sawirrada maskaxda si aad si fiican u xafiddo? - VIDEO
socdaNidaamyada macluumaadka isku-dhafka ah iyo amniga, soo noqoshada xaqiiqda